Obi De Nna Ho Asɛm Reteetee Me | Mmabun
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French French Sign Language Ga Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kabuverdianu Kachin Kazakh Kikamba Kikongo Kinyarwanda Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Moore Myanmar Ndau Norwegian Oromo Ossetian Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Swahili Swedish Tagalog Tamil Tatar Telugu Thai Tiv Tojolabal Tsonga Tswana Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Urhobo Valencian Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie Sɛ Obi De Nna Ho Asɛm Reteetee Me Ɛ?
Ebia wobɛka sɛ: “Sɛ me ne no da a, sɛ ɛnyɛ hwee? Ade yi, sɛ́ obiara yɛ bi?”
Nokwasɛm: Ɛnyɛ obiara na ɔde ne ho hyɛ ɔbarima ne ɔbea nna mu.
Ɛwom, ebia woakenkan nhwehwɛmu a nkurɔfo ayɛ ahu sɛ wɔn a wɔde wɔn ho hyɛ ɔbarima ne ɔbea nna mu no dɔɔso. Yɛmfa Amerika nyɛ nhwɛso. Nhwehwɛmu kyerɛ sɛ, ɛntɔ sɛ ɛhɔ mmofra nwie ntoaso sukuu no, sɛ wuyi wɔn mu mmiɛnsa biara gyina hɔ a, mmienu ne obi ada pɛn. Nanso, nea saa asɛm no san kyerɛ ne sɛ, mmofra mmiɛnsa no mu baako ne obiara nnae da. Wɔn a wɔne obiara nnae da no, sɛ woka wɔn bom a, wɔdɔɔso pa ara.
Wɔn a wɔde wɔn ho ahyɛ ɔbarima ne ɔbea nna mu nso ɛ? Nhwehwɛmufo kyerɛ sɛ mmabun a wɔte saa no mu pii hyia ɔhaw a edidi so yi mu bi:
Ahoyeraw. Mmabun a wɔnwaree nanso wɔne obi ada no pii ka sɛ wɔanu wɔn ho sɛ wɔyɛɛ saa.
Sɛ wonwaree na wo ne obi da a, ɛte sɛ nea wode mfoni fɛfɛ bi ato fam retiatia so
Wonnye wɔn ho nni. Sɛ wɔda wie a, wɔn mu biara adwenem yɛ no nãã bisa ne ho sɛ, ‘Gyama ɛnyɛ me nko ara na ɔne me ada?’
Abasamtu. Nea mmabaa pii pɛ ne obi a ɔbɛhwɛ wɔn yiye, ɛnyɛ obi a ɔde wɔn bɛyɛ nea ɔpɛ, na owie a wayi wɔn baako ahyɛ wɔ nsa. Mmerante dodow no ara nso, sɛ wɔne ababaa bi da wie a, wɔn ani nnye ne ho bio.
Nea yɛreka akosi: Wosom bo pa ara, enti nsɛe wo ho. Onyankopɔn mmara ka sɛ ɔbarima ne ɔbea a wɔaware nkutoo na ɛsɛ sɛ wɔda. Sɛ wutie saa asɛm no a, ɛbɛkyerɛ sɛ wudi wo ho ni. Daakye sɛ woware a, wubetumi ne wo hokafo ada. Saa bere no de, dadwen biara mmɛda wo so, worenka sɛ mihui a anka, na worensuro akyiri asɛm biara. Mmom, w’ani begye pa ara.​—Mmebusɛm 7:22, 23; 1 Korintofo 7:3.
Ɔba Hohwini no Asan Aba